Ulo | HUAWEI
A na-ahụ ikuku ikuku na 1989.
Igwe ikuku na-eme ka ikuku zuru ụwa ọnụ karịrị afọ iri atọ
Ọrụ dị elu, ike ịchekwa ya, nchebe gburugburu
Industlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe obibi, bere ntụaka maka imewe na paramita. Akụkụ kachasị mkpa nke eriri gas na-azụ ahịa.Huawei n'okporo ụzọ.1Ihe ọzọ bụ, Huawei na-echebara ndụ dị ezigbo ndụ.
Industlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe obibi, bere ntụaka maka imewe na paramita. Akụkụ kachasị mkpa nke eriri gas na-azụ ahịa.Huawei na No.1 Jusxing Road, Ronggui Shunda, Foshan, Guangdong, China Productssoness Subsonal Blower nwere ikuku na-ekpo ọkụMgbe ịga n'ihu na nnọgidesi ike, Foshan Shunde Huawei Ikuku-Bliwer Mfg. CO., LTD. meriri ezigbo aha na ụlọ ọrụ.
Industlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe obibi, bere ntụaka maka imewe na paramita. Akụkụ kachasị mkpa nke eriri gas na-azụ ahịa.Huawei n'okporo ụzọ.1FOShan ShundE Huawei Ikuku MFG. CO., LTD. nwere ike ime nkwa iji nye ọrụ ahịa niile maka ndị ahịa ọ bụla.
Industlọ ọrụ ụlọ ọrụ ebe obibi, bere ntụaka maka imewe na paramita. Akụkụ kachasị mkpa nke eriri gas na-azụ ahịa.Ihe eji eme ihe ikuku nke Huawei na-echebara ọtụtụ ihe echiche. Ha bụ ọnụ ahịa kachasị mma, atụmatụ, arịrịọ mara mma, nha, na ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ anyị?
N'ime asọmpi ahịa azụmaahịa taa, Warwick Fan na ọmarịcha akara ya na mma mgbe ndị ahịa ọhụrụ natara nke ọma.
Chọrọ iji nweta ụdị arụmọrụ dị elu nke arụmọrụ dị elu, ike ichebe ihe, na-elekwasị anya na usoro na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ, iji nweta teknụzụ ọhụụ, usoro ọhụrụ, ihe ọhụrụ, ihe ọhụụ , mmepe nke ọgbọ ọhụrụ nke ka mma, ngwaahịa dị elu karịa ngwaahịa.
Ngwaahịa anyị enwetala ọtụtụ asambodo
A hụrụ ikuku ikuku na 1989. Anyị na-emepụta ikuku na-eme ka ikuku na-eme ihe karịrị afọ iri abụọ na ise.
Ụlọ ọrụ na 1998 site na asambodo ISO9001, ngwaahịa ndị ahụ enwetara ul, CACE, VSE, na ndị ọrụ injin, ọrụ kachasị mma, ọrụ kachasị mma, njikwa dị mma Echiche, anyị na-eme nke kachasị mma iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ
Ebe nrụpụta ụlọ ọrụ
Omuma ezi uche diri ndi ahia anyi